Kunokuba uphathise intsana
Ukuba kwakungekho sihlalo ngosuku, abazali baqala ukuvakala i-alamu. Kodwa mhlawumbi awudingi ukukhathazeka njengaye kanye. Kule ncwadi uzakufunda indlela yokubonelela ngoncedo lokuqala umntwana ngaphambi kokufika kwanyana wezilwanyana, njani kunye nantoni na yokuphatha ukubetheka kwintsana.
Iimpawu zokubanjwa kunye neyokuqala ngoncedo.
Usana luqala ukukhala xa kukho into ehlungu, kwaye kunjalo ayikwazi ukuchaza. Oku kusebenza nokuqhenqa. Xa uthinta isisu somntwana, kwaye ngelixa ezama ukutshiza, ukubetha kunye nokukhala, kuthetha ukuba lixesha lokumnceda. Okokuqala, kufuneka unike umntwana wakho amaminerali, kodwa angabonakali ngamanzi, usebenzisa i-seringile engenayo ngaphandle kwenaliti okanye usebenzisa i-teaspoon. Xa ubuncinci amanzi amancinci angena ngaphakathi, kunceda ukunciphisa isitulo kwaye kuququzelele ukuchaswa. Ukuba le ndlela elula ayinakunceda, ngoko ungasebenzisa ezi ngcebiso.
Isisombululo esona siqhelekileyo kunye esilula, esisoloko sigqibo sokusombulula le ngxaki isisu sokusasa.
Emva kokuba unike amanzi kumntwana, qhubeka uhlalisa isisu. Okokuqala, hlamba izandla zakho ngamanzi afudumele uze uwahlambe. Ukuba umntwana usoloko enenkinga yokuqhaqhazela, ke uhlambe rhoqo. Kunconywa ukuba uyenze kangangeentsuku ngosuku - emva kokulala, ngaphambi kokutya, emva kweyure emva kokutya. Beka umntwana emhlane wakhe, ngexesha lokuhamba kwe-massage ungacindezeli kanzima emzimbeni. Kubantwana ukuya kwiinyanga ezintandathu, ixesha lokuxilisa li-1-2 imizuzu, emva kweenyanga ezintandathu - 2-3 imizuzu. Ngethuba lokusilalisa kufuneka uxoxe nomntwana, umomotheka, uqaphele imeko yakhe. Ukutshatyalaliswa kufuneka kwenziwe ukwenzela ukuba akubuhlungu kwaye akubanga kubandezeleka.
1. Intendelezo yesango, icala langaphakathi, yenza i-circular motion-stroking nge-clockwise, ukuqala kwintonga. Ukwanda okongeziweyo isangqa, sisuka ekhoneni elingezantsi elingaphantsi kwe-hypochondrium echanekileyo, ehamba ukusuka kwicala lasekunene kuya kwi-hypochondrium engasekhohlo, kwaye uhambe uye ekhoneni lasekhohlo. Zama ukungacinezeli kwisibindi kunye nepeni.
2. Ummandla oqingqiweyo kufuneka ufakwe kumacala omabini ngezandla uze udibane nawo ukusuka kwelinye icala kwicala kwiindawo zemigodi.
3. Ngesandla sakho sokunene, yenza izibetho ezingentla - ukusuka kwintonga yomnatha kunye nohla-ukuya kwindawo ye-pubic.
4. Enye i-massage yinxalenye engezantsi yekholoni, idlula kwi-rectum. Kubalulekile ukwahlula isisu kwiindawo ezine. Kwinqanaba elisezantsi lekhohlo yikholoni, ewela isikwere ukusuka phezulu ukuya ngaphantsi. Iyakwazi kakuhle xa izaliswa kwaye ivakalelwa njenge-roller. Gxobhoza intlungu ngeminwe emibili. Ukusasaza ukunyuka kwemizuzu emibini, musa ukuhambisa iminwe yakho. Nge-massage enjalo, umntwana, owayenomqumbo, kufuneka afune ukukhupha intlungu emva kwemizuzu engama-1-2.
Enye indlela i-gymnastics. Emva kokusilalisa, ngaphandle kokutshintsha isikhundla somntwana, elele emqolo, kwakhona, ukugoba kwaye uguqe imilenze 6-8 ngamaxesha, ucinezele kwisisu. Yenza umsebenzi "ibhayisikili" kabini. Emva koko cindezela imilenze yomibini malunga nesisu somntwana, ubambelele kule ndawo imizuzwana emibini, ulungele imilenze.
Ngomnye umzimba, uya kufuna ibhola yokuzivocavoca okanye ibhola eneempondo. Kufuneka ubeke isisu somntanakho kwibhola ukuze athabathe iingalo zakhe ngeempondo, kwaye uyigqithisele imizuzu engama-1-2. Ngeli xesha, kufuneka uxoxe nosana, bhucula iingoma, ukuze akwazi ukuzonwabisa nale gymnastics, kwaye angesabi.
Ukuba ukutyunjwa kwintsana engasayi kudlula emva kokusilalisa, ngoko kufuneka uzame iinkqubo zamanzi. Ukucwilisa kwindawo yokuhlambela ngamanzi afudumeleyo, yiphathe, yifake ngehayile uze uyisule. Emva koko wabeka umntwana owomileyo kwisisu esisetyhini somama. Kukulungele ukubeka umntwana kwisisu, kwaye kungekhona ngasemva, ukuba kukho i-colic okanye ingqumbo. Ngaloo ndlela, ukuzihlaziya umzimba kuyenzeka, oku kunceda ukukhuthaza okuphakathi kwayo kunye negesi kumathumbu.
Ukuba umntwana uyaqhubeka ekhala kwaye akukho migaqo inceda ekugqibeleni ukuqothulwa, uze uzame ukusebenzisa ikhandlela le-glycerin. Ukuze wenze oku, faka umntwana emhlane, ugobe imilenze kwisisu uze ufake ikhandlela kwi-rectum. Kodwa kufuneka kukhunjulwe ukuba kunokwenzeka ukunyanga umntwana ngale ndlela kwiimeko ezinqabileyo kakhulu, kuba le ndlela ikhokelela ekugqiliseni.
I-Catheter okanye i-tube tube.
Ukuba usana luye lwaqhawula kwaye lukhuphuze umveliso wegesi, sebenzisa umbhobho wegesi. Kufuneka uthenge i-catheter yecatter kwi-pharmacy. Xa ufaka umbhobho wegesi okanye i-catheter kwi-rectum, faka umntwana ecaleni okanye kumqolo wayo, ugobe imilenze kwisisu. Ukwenza ityhubhu okanye i-catheter ibe lula ukuyijoba, kucetyiswa ukuba ubencwine nge-petroleum jelly okanye i-cream cream.
Ngaphambi kokusebenzisa i-enema, qhagamshelana ne-dokotela wezilwanyana kuqala, akudingeki ukuba uphathwe.
Ziziphi iziyobisi ezinokunyanga ukunqandwa komntwana?
Ukuphatha unyango kwiintsana, oogqirha badla i-lactulose isiraphu (iDufalac). Nge-intestinal colic kunye nokubetha, unganika "Espumizan", "Plantex", "Sab Simplex" ngaphambi kokutya.
Yintoni enokumondla umntwana ngokuqhawulwa?
Enye inyanga ubudala, qalisa ukunika umgca owodwa wejusi ye-apula exutywe kwi-apula entsha. Umama oncelisayo kufuneka abandakanye iziqhamo kunye nemifuno esandul 'ukutsha ukutya, ngaphandle kwebhanana. Ku luncedo ukuwasebenzisa ngendlela yealadi egqoke ngeoli yemifuno. Kuhle ukuba usebenzise iresiphi enjalo: amaqabunga ama-2-3 ama-apricots omisiwe kunye neengcwangu, izityalo ezincinci zokuthulula i-kefir ubusuku bonke, udle ekuseni. Zonke ezi ziza kubakho ubisi lwebele, oya kumondla umntwana, oluya kukunceda ukuseka isondlo sesisu kunye nesitulo.
Gcina ukhumbule ukuba ukuqhenqa kwintsana kuphulwa kwemisebenzi eqhelekileyo yomzimba wakhe, kungekhona isifo. Ngoko, kufuneka ufumene izizathu zokubanjwa, ngokubhekiselele kwinqanaba labantwana, kwaye kuyinqweneleka ukuba ungabandakanyeli unyango.
Indlela yokufundisa umntwana ukuba afune
Iintsana eziphumelelayo ngaphambi kokulala
Iziphumo zokuhanjiswa kwangaphambili kwentuthuko yabantwana
Ingoma yabantwana: i-lullaby
Indlela yokunciphisa i-colic kwiintsana
Ukuze kungabi nantlungu kwiinyanga zokuqala
Isicelo sokuqala sosana olusanda kuzalwa
Ngaba ioli yesoya
Indlela yokuxhobisa ikamelo lokulala labantwana ababini
Isaladi yeklabishi ngeekroti
I-pancake enesicatshulwa kunye nomlomo kunye ne-cottage cheese: zokupheka eziphambili zokupheka
I-brronchitis kubantwana: iimpawu kunye nonyango
Kwenzeka ngokukhawuleza ukwandisa umkhuhlane?
Imimangaliso yoNyaka omtsha
Indlela yokwenza iinwele ziphilile kwaye zihle?
Uthando nomntu ovela kwelinye ilizwe
Indima yobuhle behlabathi ebomini bhinqa
I-Galetti ngee cherries kunye neebhilikiti
Ummeli wezeNtsapho uFriske usongela iSpepelev ukubanjwa
Ubunzima bokuncelisa amabele amakhulu
Ngubani igama lomntwana?
Isaladi yamakhukhamba ebusika: kunye no-anyanisi kunye neoli yezityalo, ngaphandle kokuncipha kunye naso. Iindlela zokupheka ezihamba phambili ngeyiteyibhile zeeardi zasebusika ezikhukhamba - kunye nesithombe
Ziziphi iintlobo zabasetyhini abazenzayo ngaphandle kwezesondo?